I-China Monoblock Control Valve DCV40 yokukhiqiza kanye neFektha | Junbao
I-Model DCV40 enokwakhiwa okuphezulu kwengcindezi yokwakhiwa kwe-monoblock iyizinhlalu zokulawula ezithuthukiswe ngokuzimela yinkampani yethu. ♦ I-valve yangaphakathi yokuhlola: I-valve yokuhlola ngaphakathi komzimba we-valve ukufaka i-hydraulic uwoyela ukuthi ingabuyiswa. ♦ I-valve yangaphakathi yokusiza ngaphakathi: I-valve yokusiza ngaphakathi komzimba we-valve iyakwazi ukulungisa ingcindezi yokusebenza kohlelo lwe-hydraulic. ♦ Indlela kawoyela: Ukujikeleza okuhambisana, amandla angaphezu kwenketho ♦ al ...
I-Model DCV40 enokwakhiwa okuphezulu kwengcindezi yokwakhiwa kwe-monoblock iyizinhlalu zokulawula ezithuthukiswe ngokuzimela yinkampani yethu.
♦ I-valve yangaphakathi yokuhlola: I-valve yokuhlola ngaphakathi komzimba we-valve ukufaka i-hydraulic uwoyela ukuthi ingabuyiswa.
♦ I-valve yangaphakathi yokusiza ngaphakathi: I-valve yokusiza ngaphakathi komzimba we-valve iyakwazi ukulungisa ingcindezi yokusebenza kohlelo lwe-hydraulic.
♦ Indlela kawoyela: Ukujikeleza okuhambisana, amandla angaphezu kwenketho
♦ Indlela Yokulawula: Ukulawulwa kwemanuwali, ukulawula i-pneumatic, hydraulic kanye nokulawulwa kukagesi ngokuzithandela.
Ukwakhiwa kwe-ve alve: ukwakhiwa kwe-monoblock, ama-1-8 levers.
Fun Umsebenzi weSpool: 0, Y, P, A.
♦ Inketho: Ilokhi ye-Hydraulic iyatholakala ukuthi ingezwe ku-A no-B port.
♦ I-valve isetshenziswa kabanzi ohlelweni lwe-hydraulic lwe-forklift, imoto yemvelo nemishini yokulayisha ekhanyayo.
Idatha enguModeli Dcv40
Esedlule: Ivelu yokulawula iMonoblock 5200
Olandelayo: I-Monoblock Controlveve P80
I-Monoblock Control Valve ye-Youli